Hnin Phyu – Page2– AYA Bank
AYA Bank Kicks offaNew Core Banking System Migration Today
Posted on June 30, 2017 June 30, 2017 by Hnin Phyu
Transformation will improve access to secure, reliable financial services for Myanmar Yangon, Myanmar, 27 June 2017: AYA Bank (Ayeyarwady Bank) has just started the implementation of transformative project which will overhaul its core banking system, digitalise operations and improve overall efficiency throughout the organisation. At the ceremony held at the bank’s headquarters this morning where[…]
Seedstars Yangon 2017
Posted on June 28, 2017 June 28, 2017 by Hnin Phyu
Seedstars Yangon 2017 isacompetition when the best seed stage tech startups in Myanmar are selected in order to compete at the global tech startup completion. The competition was held at AYA Bank’s River View headquarters on 21 June 2017 at 7pm and numerous attendees were there as it was supported by Omidya, Ooredoo,Thura[…]
AYA Bank and Visa launch New Credit Cards in Mandalay
Posted on June 21, 2017 June 21, 2017 by Hnin Phyu
The Silver, Gold and Platinum AYA Visa Credit Cards bring financial inclusivity to Myanmar and connect cardholders to more than 40 million merchants in Myanmar, abroad and online. AYA Bank (Ayeyarwady Bank) Limited held an grand event today in Mandalay on 16 June 2017 introducing three new credit cards for its customers in partnership with[…]
AYA Bank to partner with Misys in its next bank transformation program
Posted on June 5, 2017 June 5, 2017 by Hnin Phyu
Transformation will improve access to secure, reliable financial services for Myanmar’s underbanked Yangon, Myanmar,2June 2017: AYA Bank (Ayeyarwady Bank) has selected Misys FusionBanking to supportatransformative project which will overhaul its core banking system, digitalise operations and improve overall efficiency throughout the organisation. U Myint Zaw, Managing Director of AYA Bank said,[…]
AYA Bank and Visa Announce New Credit Cards for Myanmar
Posted on June 1, 2017 June 2, 2017 by Hnin Phyu
The silver, gold and platinum AYA Visa Credit Cards bring financial inclusivity to Myanmar and connect cardholders to more than 40 million merchants in Myanmar, abroad and online. YANGON, MYANMAR, 30 May 2017 – AYA Bank (Ayeyarwady Bank) Limited has today launched three new credit cards for its customers in partnership with[…]
ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက်သည် ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ မေလအတွင်း ဘဏ်ခွဲအသစ် ထပ်မံဖွင့်လှစ်
Posted on May 25, 2017 by Hnin Phyu
ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက်သည် ၂၀၁၇ခုနှစ် မေလ ၂၅ရက်နေ့တွင် (၂၁၉)ဘဏ်မြောက် ဘဏ်ခွဲကို ထပ်မံ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး အထွေထွေဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုများအား စတင်ဆောင်ရွက်ပေးနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း မိဘပြည်သူ အပေါင်းအား ဝမ်းမြောက်စွာ သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။ ၂၁၉။ နေပြည်တော်ဘဏ်ခွဲ-၃(ဥတ္တရသီရိ) တိုက်အမှတ်(အက်စ်-၁၉)၊ ရာဇသင်္ဂဟလမ်း၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။ ဖုန်း – ဝ၆၇-၄၃၅၂၀၅၊ ၄၃၅၂၀၆၊ ၄၃၅၂၀၇၊ ၄၃၅၂၀၈၊ ၄၃၅၂၀၉။ Fax – ဝ၆၇-၄၃၅၂၁၀၊ ၄၃၅၂၁၁။ ဧရာဝတီဘဏ်၏ ဖွင့်လှစ်ပြီးသော ဘဏ်ခွဲများကို AYA Website http://ayabank.com/contact/branches/ တို့တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက်၏ ၂၀၁၇ နှစ်အတွက် နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေး (Annual General Meeting) ကျင်းပခဲ့ခြင်း
Posted on May 17, 2017 May 17, 2017 by Hnin Phyu
ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက်၏ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွက် နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေး(Annual General Meeting)ကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မေလ(၁၂)ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ နိုဗိုတယ်ဟိုတယ် (Novotel) Yangon Ballroom ၌ ကျင်းပခဲ့ရာ အစည်းအဝေးသို့ ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက် ဥက္ကဌ ဦးဇော်ဇော်နှင့် ဒုဥက္ကဌများ၊ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာနှင့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ၊ ဌာနအကြီးအကဲများနှင့် ဌာနအသီးသီးမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ဒေသဆိုင်ရာမန်နေဂျာများ၊ ဘဏ်ခွဲတာဝန်ခံများနှင့် ဘဏ်ခွဲများမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ စုံလင်စွာ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
Best Bank for CSR by Asiamoney
AYA Bank Myanmar was selected as Best CSR in Myanmar from Asiamoney magazine and also was published in Asiamoney magazine issue 1 2017. AYA Bank Myanmar is not known as one of the most environmentally sensitive of nations. Several decades of rapacious general trashing its forests for fast money have seen to that. Nor is[…]
ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက်သည် ၂၀၁၇ခုနှစ် မေလ ၁၇ရက်နေ့တွင် (၂၁၈)ဘဏ်မြောက် ဘဏ်ခွဲကို ထပ်မံ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး အထွေထွေဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုများအား စတင်ဆောင်ရွက်ပေးနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း မိဘပြည်သူ အပေါင်းအား ဝမ်းမြောက်စွာ သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။ ၂၁၈။ ဖားကန့်ဘဏ်ခွဲ အမှတ်(မမ-၁၄၈)၊ မြို့မကွင်းအမှတ်(ချပ်-၁)၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ဖားကန့်၊ ကချင်ပြည်နယ်။ ဖုန်း – ဝ၇၄-၇၀ဝ၈၁၊ ၇၀ဝ၈၂၊ ၇၀ဝ၈၃၊ ၇၀ဝ၈၄၊ ၇၀ဝ၉၃။ Fax – ဝ၇၄-၇၀၁၉၄၊ ၇၀၁၉၅ ။ ဧရာဝတီဘဏ်၏ ဖွင့်လှစ်ပြီးသော ဘဏ်ခွဲများကို AYA Website http://ayabank.com/contact/branches/ တို့တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။